Coolplay Park Relife Series- iPad Mini3Grey Wifi+4G(64G): Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Coolplay Park Relife Series- iPad Mini3Grey Wifi+4G(64G)
More Tablets from Apple
Spend Ks 11,000 get Ks 1,000 off
Product details of Coolplay Park Relife Series- iPad Mini3Grey Wifi+4G(64G)
Support7Days Free Return၇ရက်အတွင်း ပစ္စည်းပြန်လဲနိုင်သည်
45 Professional Test၄၅မျိုးလုံး စစ်ဆေးစမ်သပ်ပြီး
180 Days Warrantyအာမခံ၁၈၀ရက်
နေ့စဉ်ဈေးတွေအတတ်အကျရှိသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်းတားမျှင့်မရနိုင်ပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဈေးအတတ်အနှိမ့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်တွင်းပစ္စည်းပြန်အမ်းတာတွေ ဈေးပြင်ပေးတာတွေလုံးဝလုံးဝမဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ လူကြီးမင်းများအားနားလည်ပေးပါရန်လေးစားစွာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
အရစ်ကျဝယ်နည်းတော့ကျွန်တော့်တို့ဆိုင်လောလောဆယ်တော့ လက်မခံသေးပါဘူး ဒါပေးမယ့် နောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကြိုးစားပြီးအကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်
Support Network: Wifi(16G); Wifi+4G(64G)
System Version: ios 12.0.1
Rom: 16G; 64G
Why so cheap？ဘာလို့ဈေးသက်သာတာလဲ Because there are many geeker, they enjoy experiencing new electric products, after they experienced, they just sold out so they can experience other new products, our relife series is from these guys. We get from factory directly.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Relife တံဆိပ် ကgeek playerဘက်ကနေတိုက်ရိုက်ပြန်သိမ်းသောကြောင့် geek player ကခဏသာစမ်းသုံးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရက်အနည်းငယ်သာပဲစမ်းသုံးထားသောကြောင့် mobile phoneက အသစ်အတိုင်းလိုပဲ
Products like this can satisfied students and work class, buy good products with less money.
Relife တံဆိပ်သည် အများအားဖြင့် တစ်ချို့သော customer များအား သုံးဆောင်လိုသည့် ဈေးနှုန်းတွင်းသာရရှိနိုင်ပါသည် quality ကောင်းသောပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
Coolplay Park Relife series focus on relife these electric products and save our bank account.
ဈေးနူန်းနည်းသောကြောင့် လူအများက orderတွေမတင်ရဲဘူးဖြစ်ကျတယ် လူအများကလဲမေးကြတယ် ဘာလို့ဈေးတွေအရမ်းနည်းရလဲ တစ်ချို့customerတွေကလည်း ပစ္စည်းရပြီး အရမ်းသဘောကျတယ် ဒါပေမယ့်စိတ်မသင်္ဂါဖြစ်နေကြတယ် ဒီလောက်ဈေးနည်းရတာလားဆိုပြီပေါ့ အမှန်တော့ လူကြီးမင်းများဒီလို စိတ်ပူးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲအရမ်းနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်အခု အဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထားမူတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးအတွက် စိတ်မသင်္ဂါမူတွေဖြေဖြောက်နိုင်ရန်အတွက် Coolplay Park original သည်copyယူခြင်းမလုပ်ရပါလို့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းရောင်းအားတွေကိုကြည့်ရတာပေါ့
Specifications of Coolplay Park Relife Series- iPad Mini3Grey Wifi+4G(64G)
Ratings & Reviews of Coolplay Park Relife Series- iPad Mini3Grey Wifi+4G(64G)
Not bad, it's nice to use
Storage Capacity:64GB, Color Family:Grey Wifi+4G
Other questions answered by Coolplay Park (14)
မင်္ဂလာပါခင်​ဗျာ .. နှစ်​လုံး​လောက်​ရချင်​တယ်​ခင်​ဗျာ SIM သုံးရတဲ့အလုံးပါ ရနိုင်​ပါသလား
Ko S. -3weeks ago
၂လုံးဆိုရင်တော့ pre order မှာရပါနတယ် deposit 70% အရင်ပေးရပါတယ်ရှင့် facebook ကနေfollow လုပ်ပီးစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်
Coolplay Park - answered within2hours
network က wifi မဟုတ်ဘဲတခြားဟာနဲ့သုံးလို့ရလား
M -. -3weeks ago
ဒီဟာက 4G သုံးလို့ရပါတယ်ရှင့်
Coolplay Park - answered within 37 minutes
ဝယ်တာက ဟုပါတယ် ပိုက်ဆံကိုဘယ်လိုရှင်းပေးရမာလဲဗျ
M -. -4weeks ago
Coolplay Park - answered within 18 minutes